Umalusi waseJalimane: Ukuzalwa Okudumile - Izinhlobo
Umalusi waseJalimane: Ukuzalwa Okudumile
Hlangana ne- Umalusi waseJalimane (GSD). Ethandwa umhlaba wonke futhi eguquguqukayo ngokumangazayo, lokhu okuhlanzekile kuyizinto zamaphupho.
Noma ngabe ufuna inja esebenzayo, inja yokubonisa, noma umlingani womndeni ophelele, ungabe usadlula le canine.
Kulo mhlahlandlela, sizohlanganisa konke odinga ukukwazi nge-GSD. Hlala nathi!
Uyini umsuka woMalusi waseJalimane?
Lokhu kubukeka kanjani i-GSD
Ubumnene be-German Shepherd: buqotho futhi buhlakaniphe kakhulu
Amathiphu okuqeqesha abelusi baseJalimane
Izinkinga zezempilo zikaMalusi waseJalimane
Yini okufanele idliwe uMalusi waseJalimane?
Umalusi waseJalimane udinga ithoni yokuzivocavoca umzimba.
Izinhlobo Ezithandwayo Ezihlanganisiwe ze-GSD
Umalusi waseJalimane uqhathanisa nezinye izinhlobo
Ukuthenga umdlwane waseGerman Shepherd
Ukuthola abalimi abahle kakhulu baseJalimane
Ukwamukelwa nokusindiswa komalusi waseJalimane
Isiphetho: ngabe lolu luhlobo lwakho?
Ukuqonda ngokugcwele umnyombo wale nja eyinganekwane, umqondisi wethu uzoqala ngesifundo somlando.
Ake sibuyele emuva emuva emuva ngonyaka ka-1899 lapho lo mhlobo uqala ukuba khona. Indoda eyadunyiswa njengoMalusi wokuqala waseJalimane yayingukaputeni wamahhashi aseJalimane okuthiwa UMax von Stephanitz .
Ngaleso sikhathi, izinja ezinelusi ezinethalente zazibongwa ngezakhi zazo zofuzo, kangangoba abalimi babezohamba besuka kulo lonke elaseJalimane beyozala izinja zabo okhilimu abavela kokhilimu .
Iqiniso ukuthi, kwakungekho luhlobo oluhlukile lwezinja zokwalusa esifundeni. Esanda kuthatha umhlalaphansi enkonzweni yezempi, ukaputeni ozimisele waphupha ngenja yokwalusa yaseJalimane eyayingenakulinganiswa ubuhlakani, ukusebenza kahle nokushesha.
Umsebenzi wesibili kaVon Stephanitz waqala lapho eba nentshisekelo yokuhlolwa kofuzo ukudala i-canine yokugcina.
Uthele isikhathi namandla ekuhambeni lonke elaseJalimane emibonisweni ehlukahlukene yezinja ukuze ibhekwe. Wafunda Izindlela zokuzalanisa zaseBrithani kwazise babedume ngezinja zabo zokwelusa ezingenacala.
Ekugcineni, komunye umncintiswano, uVon Stephanitz wabona i- inja engajwayelekile efana nempisi futhi yaxakaniseka ngumzimba wayo oqinile nokuba khona kokuxwayisa. Wathenga inja wayiqamba ngokuthi uHorand von Grafrath.
UHorand von Grafrath, uMalusi wokuqala waseJalimane ( umthombo )
Le nja ibizoba inhlabamkhosi yegazi le-GSD. Ukaputeni wasungula Inhlangano Yabelusi BaseJalimane - umphakathi ogxile ekwakheni uhlobo lwenzalo kaHorand.
Ngaphandle kwalokhu, u-von Stephanitz waqondisa lolu hlobo ekufuyeni ngoba isidingo sezinja ezinjalo sasesinciphile ngenxa yezimboni. Wayazi ukuthi ikusasa lale hlobo lezinkanyezi lizoba phakathi umsebenzi wamaphoyisa nowezempi.
Ngesikhathi se-WWI, u-von Stephanitz wasebenzisa ithonya lakhe ukukholisa amasosha aseJalimane ukuthi uhlobo lwakhe olusha lwe inja esebenzayo kungaba wusizo. I-GSD yokuqala yaba yi- Inja ye-Red Cross , futhi kungekudala yathatha ezinye izindima ezinjenge unogada, isithunywa, kanye nenkampani yenethiwekhi.
Ngemuva kwempi, amasosha aseMelika ahlatshwa umxhwele ngamakhono e-GSD futhi abuyisa amaningi awo eMelika. Izinhlobo zazichuma, zingabi yinja esebenzayo kuphela, kodwa zathandwa umngane nenja yomndeni.
Namuhla, i-GSD ingenye enkulu kunazo zonke kuyahlukahluka izinhlobo. Ithola amamaki aphezulu njengenja yamaphoyisa, inja yamasosha, i-narcotic sniffer, i-search and rescue hound futhi inja yesevisi.
Amaqiniso ama-3 amaGerman Shepherd amangalisayo
Ingabe igama I-Tin Tin Tin kuzwakala kujwayelekile? Uthole udumo lomhlaba wonke njengesihlabani sokuqala kumabhayisikobho, futhi okwenza lo mhlambi uzuze ukuthandwa. Elinye iqiniso lebhonasi: URin Tin Tin kwakuwumdlwane othathwe endaweni yempi eyayigcwele ibhomu ngesikhathi seWWI ngaphambi kokuyiyisa e-US.
Idume kangakanani i-GSD? Yiyona Uhlobo lwesibili olubhaliswe kakhulu ku-AKC nerejista yesi-7 ephezulu kakhulu yeKennel Club.
Ngo-1928 i-GSD egama linguBuddy yafika e-US nomnikazi wayo ongaboni, uMorris Frank. UBuddy uqede ukuqeqeshwa okukhethekile eSwitzerland ukusiza uFrank. Abantu baseMelika bamangala lapho ingane yakhe enobungcweti isiza umnikazi wayo ukuwela umgwaqo omatasa waseNew York. Waba yi inja yokuqala yokuqondisa e-US.
I-German Shepherd iyi-canine enhle, ene- omude, umzimba omncane nezinqe ezixegayo . Ikhanda lihlala lide futhi liqaphile ngezindlebe ezihlabayo nempumulo ende okuyinika ukufana kwempisi.
Angafinyelela ubude be- Amasentimitha angama-25 (65 cm) futhi unesisindo esifinyelela ku Ama-88 lbs (40 kg). Unamandla futhi ubushelelezi, wakhelwe ijubane nokushesha.
Funda futhi : Ingabe inja encane yaseGerman Shepherd yenja ingokoqobo?
Zivuka kanjani izindlebe zikaMalusi waseJalimane
Imidlwane yaseJalimane i-Shepherd ivame ukuba nezindlebe ze-floppy, njengoba uqwanga lusathambile futhi lusakhula.
Lapho ukuqhula kuqala Amasonto ayi-16 kuye kwangama-20 , Izindlebe zeGerman Shepherd zizoqala ukuzimela. Uma bengemi ngezinyanga ezi-5 futhi lokhu ukubukeka okufisayo, mthathe uye kudokotela wezilwane ukuze ahlole.
Ijazi likaMalusi waseJalimane
Kunemibala eminingi yamabhantshi namaphethini aboniswe ngalolu hlobo. Sicela wazi ukuthi akuyona yonke le mibala ( okuluhlaza okwesibhakabhaka, isibindi, okumhlophe ) zamukelwa njengezinga lokuzala le-AKC.
Bonke abelusi abamnyama baseGerman
Bonke abelusi abamhlophe baseJalimane
Qeda umshini wokuhlanza… le nja iyachitha.
Inani elibalulekile lokuzilungisa kwabaMalusi baseJalimane liyadingeka ukugcina i- 'Shedder yaseJalimane' isendaweni. Kufanele utshale imali ekamu elinomthwalo osindayo futhi umxubha ijazi lakhe eliphindwe kabili ubude Izikhathi ezi-2 kuye kwezi-3 ngeviki.
Izindaba ezimnandi, noma ngabe she sheds like mad, his coat is engenaphunga . Izindaba ezimbi ukuthi le nja ikhona hhayi i-hypoallergenic.
Izinganekwane mayelana nokubonakala kukaMalusi waseJalimane zembuliwe
Njengoba sishilo, lezi zinja ziza ngezithunzi eziningi kunokumnyama nokumnyama kuphela. Kodwa-ke, imibala yejazi efana ne-blue, sable, nesibindi ayithathwa njengezinga lokuzala. Qaphela abalimi abathengisa lezi zimfanelo “njengezingajwayelekile” bese ucela imali ethe xaxa.
Umdlwane we-GSD uzozalwa unejazi elimnyama, elimpunga noma elimhlophe. Ayikho indlela yokutshela ukuthi umdlwane wakho waseJalimane Shepherd uzoba umbala onjani kuze kube yilapho usukhona Amaviki ayisishiyagalombili ubudala.
Ngabe abelusi baseJalimane bayingxenye yempisi? Impela babukeka sengathi bangaba! Iqiniso lodaba yibo abanjalo HHAYI ingxenye impisi. I-GSD yehla kuGrey Wolf, kakhulu njengeChihuahua noma noma yiziphi (zonke) izinhlobo zezinja.
Abanye abantu bayazibuza ukuthi ngabe uMalusi waseJalimane angaba yini namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka. Bangakwazi, kepha akuvamile ngokwedlulele. Uma i-GSD inamehlo aluhlaza kwezemidlalo, kungenzeka ukuthi ivela ku ukuhlukahluka kofuzo noma isizinda sokuxuba esihlanganisiwe.
Izinhlobo ze-German Shepherd
Sishilo i- konke okumnyama futhi i-GSD emhlophe yonke izikhathi ezimbalwa kakade. Ingabe ziyizinhlobo ezihlukile zodwa?
Ake sibone ukuthi lezi zinja zimayelana nani.
Umalusi Omhlophe waseJalimane ( umthombo )
Kukhona ukudideka okuzungezile UMelusi waseJalimane omhlophe . Uma wenza umsebenzi wesikole wasekhaya, uzothola abanye abathi lokhu kuwuhlobo oluhlukile ngokuphelele.
Iqiniso lodaba ukuthi umehluko kuphela phakathi kwale nja neGSD yendabuko yi umbala wejazi.
Izici, impilo, nesimo sengqondo kuyefana ngoba kuyinja efanayo!
Impikiswano yavela ngawo-1930 lapho isakhi sofuzo esimhlophe esihlale sikhona nohlobo lwaso sithathwa njengephutha, ukuvimbela ukuqashelwa.
Abasekeli be-GSD emhlophe baqala ukwakha amakilabhu abo kanye namarejista ngawo-1970. Kusukela lapho, kwaqashelwa yi UKC, kepha hhayi i-AKC.
UMalusi Omnyama waseJalimane
Lobu buhle obumnyama kwesinye isikhathi buthathwa njengohlobo oluhlukile futhi. Njenge-White GSD, unjalo I-100% ehlanzekile ngomehluko kuphela wokuba umbala wejazi.
Eqinisweni, nabelusi baseJalimane abanemibala yendabuko bangaveza imidlwane emnyama yonke. Ngaphandle kokwehluka kwawo ngombala, ama-GSD kanye nabelusi abamnyama baseJalimane bazokwabelana ngobuntu nobuntu obufanayo.
IGSD ingenye yezinhlobo ezinethalente kakhulu laphaya. Ungu ukuzethemba, ukuqeqesha kalula nokuthanda.
Ukwethembeka kungenye yezinto ezichazayo zalolu hlobo. Eqinisweni, akuvamile ukuthi i-GSD ikhethe ilungu elilodwa lomndeni ngaphezu kwamanye asephaketheni lomuntu.
Ungathembela kuye ukuthi angalokothi ashiye uhlangothi lwakho. Ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuba nomculi obalekayo okhathazayo ohlale ekucindezela ngeminyango evaliwe.
Ukwethembeka kwakhe kusho ukuthi uzohlala ephapheme ngaso sonke isikhathi. Abelusi baseJalimane okuvikela kakhulu , ngesibindi esingantengantengi esizomenza akhonkothe ​​efasiteleni noma aphume ngomnyango ngaphandle kwesikhathi sokugcina umndeni wakhe nensimu yakhe iphephile.
Le mfanelo yenza i-GSD ibe yinhle kakhulu inja egadayo . Ngeshwa, ubuye wazakhela idumela njenge- uhlobo olunolaka.
Ukuzinikela okuphelele futhi okuphelele kumnikazi wakhe kusho lokho ukukhathazeka ngokwehlukana kungaba yinkinga. Ukuchitha amahora amade ehlukanisiwe kuzokwenza iso lakhe lezo zicathulo noma usofa wesikhumba onamathe aconsayo avela emazinyweni akhe alambile.
Ingabe i-GSD iyingozi kakhulu ukuba seduze nezingane?
Impendulo emfushane yalokhu ithi CHA. I-GSD ingenye yezinja zomndeni ezithandwa kakhulu. I- I-American Pit Bull Terrier kanye ne- Ikhoyili ezinye izinja ezihlushwa umbono ongaqondile kodwa empeleni zingabangane abahle kakhulu bezingane.
Ihlazo eliyingozi livela ezinjeni okuye kwaba njalo ukuphathwa kabi noma ukuqeqeshwa ngokungafanele . Ngokwethembeka, lokhu kungasetshenziswa kunoma yiluphi uhlobo!
Lapho isilwane (ikakhulukazi inja) singanikezwa ukuqondiswa noma siboniswa ukuthi i-alpha yepakethe ingubani, kungokwemvelo ukuthi ilingise. I-GSD ngeke ithathe amathuba uma umndeni wayo usongelwa.
Umndeni wami uhlale unabaMelusi baseJalimane, ngakho ngakhula nomvikeli waphenduka inja 'momma'. Nginezinkumbulo ezimnandi kakhulu zobuntwana ngale canine endlini.
Okuhle nge-GSD ukuthi bayazi ukuthi kunini lapho sekufanele kube khona okubucayi nokuthi kunini lapho kufanele kube khona ubuwula. Futhi umuntu angaba yisilima yini!
Lapho izingane zizungeze inja esebenzayo iyancibilika, injana yangaphakathi iyaphuma futhi izogijima ithole ithoyizi layo eliyintandokazi, ilungele ukuqhuma nokuzungeza!
Sishilo ukubaluleka kwe- ukuqeqesha inja ukuqeda imikhuba engalindelekile nemikhuba emibi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi nge-GSD.
Kubalulekile ukuthi kwethulwe ukuqeqeshwa kokulalela kanye nokuhlangana kuqala kwabantu. Lokhu kuzo…
Menze ajwayele ukuba nabantu angabazi nezinye izinja
Inselele ubuhlakani bakhe
Yeka isithukuthezi nokuziphatha okulimazayo, njengokuhlafuna
Abelusi baseJalimane bazalelwa ukusebenza, ngakho-ke akukho lutho olumenza ajabule njengokunikezwa umsebenzi wokwenza.
Uyachuma esifundweni sokushesha noma emncintiswaneni wezinja, ubheke kumnikazi wakhe ngenselelo elandelayo. Ubukhali njengobuciko futhi ifunda ngokushesha , ulangazelela ukuhlaba umxhwele.
Izindlela ezi-3 ezihamba phambili zokuqeqesha ze-GSD
Ukusungula inkambiso yoqeqesho nakanjani kufanele kube kuhlu lwezinto ezizokwenziwa. Khumbula ukuqala ingane yakhe bese uhlala kuyavumelana ukuvuna izinzuzo ezigcwele.
1. Ukuqeqeshwa ngekhreyithi
Lapho umalusi wakho waseJalimane eyidlwane, ukuqeqeshwa kwekesi kuyindlela enhle yokwenza izindlu futhi unciphise ukucindezeleka. Lokhu kuyasiza kakhulu ukulwa nokukhathazeka ngokwehlukana okukhonjiswa yilo hlobo.
Ukuqeqeshwa kwekreyithi kwesinye isikhathi uthola ukunqikaza okungekuhle njengokuhlukumeza kakhulu ngoba inja ivalelwe amahora amaningi ngesikhathi. Eqinisweni, ukuqeqeshwa kwekreyithi kudala imvelo efana nayo lezo zinja ziyanxanela. Umhhume, onephunga lawo elijwayelekile, uyisikhala sabo sokuphumula futhi bazizwe bephephile.
Umdlwane wakho uzofunda nokusebenzisa indlu yangasese ngaphandle, ngoba izinja ngokwemvelo azithandi ukuzikhulula lapho zilala khona futhi zixhumeke.
2. Ukuqeqeshwa kokulalela
Ukuqeqeshwa kokulalela ngeke kuvuse kuphela ingqondo ebukhali ye-GSD, kepha futhi kuzosebenza njengesisekelo sayo ukuziphatha okuhle. Lokho kusho ukuthi akukho ukudonswa ku-leash, ukulandela imiyalo yakho ngokukhululekile, nokufunda ukuhlala uzolile ezindaweni ongazijwayele.
Ungaqasha umqeqeshi wezinja oqeqeshiwe ukuthi asebenze nomdlwane wakho, noma uzenzele ngokwakho. Uma unquma ukuqeqesha, nazi izeluleko eziwusizo.
Kufanele ube njalo kuyavumelana ngokuqeqeshwa.
Yiba ukuzola, ukuzethemba nokuqina. Ukuphelelwa yisineke kuzokwenza unganakwa.
Ukuqeqesha akumi ngemuva kwesifundo. Njalo qaphela lapho i-GSD yakho ilandela imiyalo nsuku zonke, kuvuza ngokudumisa.
Ungalokothi usole inja - Nina uyinkosi!
Njengoba abelusi baseJalimane bevikela kakhulu, ukuzihlanganisa nabantu kuzomsiza Nethezeka futhi uzizwe ukhululekile phakathi kwabantu angabazi.
Uma unezinye izilwane ezifuywayo endlini, zivumele zichithe isikhathi ziseduzane. Lesi isinyathelo sokuqala ekwamukelweni.
Okulandelayo, thatha i-GSD yakho uye kufayela le- ipaki yendawo yezinja . Gcina i-leash taut futhi umvumele ukuthi ahlanganyele nezinye izinja.
Yenza ipaki yenja iyingxenye ejwayelekile yesonto lakho ize ikhululeke futhi izethembe ngokwanele ukuthi ingabi khona kuleash.
Ngeshwa, impilo yinto oyodinga ukuyibuka uma une-GSD. Njengoba inethalente futhi iyamangalisa njengoba lolu hlobo lukhona, eziningana zinzima izifo zofuzo zivamile.
Izinkinga eziphezulu zezempilo zezelusi zaseJalimane okufanele uzibheke yi-hypothyroidism, i-elbow dysplasia, i-hypothyroidism, isifo sika-von Willebrand, i-thrombopathia, izinkinga zamehlo futhi dun, dun, dun ... I-HIP DYSPLASIA .
Abangu-101 ku-German Shepherd hip dysplasia
Isifo esikhulu kunazo zonke sokuzifundisa nge-canine i-hip dysplasia. Lesi sifo esibuhlungu siqala emalungeni enqina, sidale ukukhula okungavamile patterns kanye ukukhubazeka ngokuhamba kwesikhathi.
I-Hip dysplasia inomthelela omkhulu ekuhambeni kwenja, imvamisa okuholela ekushayeni.
Kunezizathu ezimbili zokuthi kungani lesi sifo sidlange ezinhlotsheni ze-GSD.
Lesi sifo engatholakali lapho inja ingumdlwane. Kuthatha izinyanga ukuthi izimpawu zokuqala zenkinga zibonwe. Uma bengafundiswanga ngalesi sifo, abathengi bavame ukuthenga umdlwane obukeka uphilile ukuze nje ukhungatheke njengoba ukhula ube umuntu omdala.
I-GSD ifunwa kakhulu. Lokho kuletha ukuthutheleka kwe- abalimi ababi ngifuna ukwenza imali esheshayo. Azilandeli imihlahlandlela noma zithathe umthwalo wemfanelo lapho zizala izinja, zidlulisa izakhi zofuzo ezibangela i-hip dysplasia ngenkathi ingcolisa imigqa yegazi enempilo.
Ungazivimba kanjani izinkinga zenyonga enjeni yakho?
Ngeke ngiyigqoke ushukela: i-hip dysplasia isifo esibuhlungu. Uthandana nenja yakho bese kuthi ukuhlupheka kuphume kungazelelwe.
Izindaba ezimnandi ukuthi kunezinyathelo ongazithatha ukuqinisekisa ukuthi uthenga uMalusi waseJalimane ngaphandle kwezinkinga ze-hip.
Njalo khetha a umfuyi ohlonishwayo. Sizokhuluma kabanzi mayelana nokuthi singabathola kanjani abalimi abahamba phambili ngokuhamba kwesikhathi.
Buza imibuzo ngomndeni womdlwane isizinda sezokwelapha futhi uma i-hip dysplasia imiselwe ngaphambili.
Umfuyi kufanele anikeze imvume yezempilo . Bazoba nezinja zabo eziqinisekisiwe nazo OFA noma I-PennHip , Ukuqinisekisa ukuthi udokotela wezilwane useqedile imisebe ye-hip X futhi wanikezwa izithupha zokuzalanisa.
Gcina indlela yokuphila enempilo yenja yakho, ene- ukudla okuqinile (yigcine iphansi ekuphatheni) nokuvivinya umzimba okuningi. Ukukhuluphala ngokweqile kubeka ubunzima obukhulu okhalweni, futhi ukuzivocavoca umzimba kuzogcina imisipha yakhe iqinile.
Uma uthenga noma usebenzisa inja ekhombisa lezi zimpawu ezilandelayo, khona-ke angaba ne-hip dysplasia futhi udinga ukumyisa kudokotela wezilwane ukuze aqinisekiswe ngokushesha.
Uyanqikaza ukwenza umsebenzi
Iqala ku- 'bunny hop' lapho uhamba noma ugijima
Uthanda umlenze othile
Ukuqubuka uma kuthintwa indawo yesinqe
I-hip dysplasia ayidingi ukwethusa. Gcina i-GSD yakho iphilile futhi uzophila impilo ende, ejabulisayo ye- Iminyaka engu-9 kuya kwengu-13 yinde.
Landela i- strict ukondla isheduli equkethe Izinkomishi ezi-3 ukuya kwezi-4 zokudla kwenja lokho kwehlukaniswa phakathi kokudla kabili ngosuku.
Kuyafaneleka ukusebenzisa imali ethe xaxa ekudleni kwezinja ezisezingeni eliphakeme ukuze i-GSD yakho oyithandayo izuze ku ikhalori eliphansi, ukudla okuqhutshwa amaprotheni .
Ilayisi, ibhali ne-oats kulula ukugayeka, kanti imikhiqizo yommbila ayinjalo. Ungangeza ama-supplements afana ne- uwoyela wezinhlanzi ukukhulisa i-Omega-3 fatty acids ekudleni kwenja yakho nokugcina ingubo yayo emnandi yoboya.
Nalu uhlu lokudla okunconyiwe okunothe kwamaprotheni kokudla kwakho kwe-German Shepherd:
I-50% kuya ku-70% inyama enamafutha aphansi ebhakwayo noma ebilisiwe
I-salmon ebhakwe, i-mackerel, i-trout noma ama-sardine
Amathambo aluhlaza anenyama
Ungakhohlwa buza udokotela wezilwane mayelana nezincomo zokudla kuMalusi wakho waseJalimane, futhi! Yonke inja yehlukile futhi idinga ukudla okuhambisana nezidingo zayo zokudla okunempilo.
Le nja yazalelwa ukuthi isebenze! Ngemuva kwakho konke, yaqala yabona isenzo ezinkundleni zempi ezinamandla zeWWI.
Uzodinga ukubeka eceleni okungenani Imizuzu engama-40 ngosuku ukunikeza i-GSD yakho isikhathi sokudlala. Le nja ichuma ngamandla avuthayo!
Ukuzivocavoca umzimba ngeke kugcine amalunga omzimba wakhe esezingeni eliphakeme kuphela, kepha kuyagudluka ukuziphatha okulimazayo njengokuhlafuna nokumba izimbali engadini yakho oyithandayo.
Qaphela ukuthi kuzofanele wenze okungaphezulu kokumvumela ukuba aphume ngemuva kwendlu. Njengoba i-GSD ihlakaniphe kakhulu, udinga ukumkhuthaza nokumphonsela inselelo. Lokho kusho ukwanelisa izidingo zakhe zomzimba nezingokwengqondo. Nayi eminye imibono.
Hamba ibanga elide noma ugijime
Dlala epaki yezinja
Ukubhukuda kulula emajoyintini
Amathoyizi okuhlafuna aphezulu wokuhudula
Amathoyizi wezinja zezinja
Setha inkambo yokugijima egcekeni lakho
Dlala ukulanda ngebhola noma i-frisbee
Kungumqondo omuhle ukulinda kuze kube inja yakho Uneminyaka engu-2 ubudala ngaphambi kokuzivumela zigijime futhi zigxume ezindaweni ezinzima. Kule minyaka yobudala, amalunga akheke ngokuphelele futhi angathandeki kakhulu ekulimaleni.
Bheka lo Malusi waseJalimane unyakazisa inkambo ye-agility!
Ngenxa yobuhle bayo, ubuhlakani bayo, nemvelo yayo enothando, i-GSD isetshenziswa kakhulu njengenja yomzali yezinhlamvu ezixutshiwe.
Nalu uhlu lwamanye ama-crossbreeds aseJalimane athandwa kakhulu.
Ukuhlanganiswa kwe-German Shepherd Lab
Ukuhlanganiswa kweGerman Shepherd Rottweiler
Ukuhlanganiswa kwe-German Shepherd Husky
Ukuhlanganiswa kwe-German Shepherd Pitbull
Umngcele weBorder Collie German Shepherd
I-Corgi German Shepherd Mix
Shalom Shepherd: Inja YamaNdiya Omdabu waseMelika kanye neJalimane Shepherd mix
IGolden Shepherd : Ukuhlanganiswa kweGolden Retriever German Shepherd
Kunming Wolfdog : Chinese Chinese Umalusi
Ukuhlanganiswa kwe-German Shepherd Doberman
Ukuhlanganiswa kwe-German Shepherd Wolf
Ukuhlanganiswa kweGerman Shepherd Boxer
Ukuhlanganiswa kweBelgian Malinois German Shepherd
Umxube waseJalimane uShephered Chow
Kunezinhlobo eziningi zezinja eziyingxenye ye- Umndeni kamelusi . Nakhu ukuthi umalusi waseJalimane ubeka kanjani ezinye izintandokazi.
GSD vs Dutch Umalusi
Lezi zinhlobo zomzala ziyafana kakhulu kepha zinokwehluka okuhlukile ekubukekeni komzimba.
I- Umalusi waseDashi ivela eNetherlands futhi yasetshenziswa futhi njengenja yokwalusa kwaze kwaba yinkathi yezimboni.
Unokubukeka okufana nempisi kodwa empeleni kuncane kune-GSD. Ikhanda lakhe liyisigaxa kunesikhathi eside.
Umehluko omkhulu umbala wejazi. Imidlalo yaseDutchie a ijazi le-brindle , i-GSD engakwenzi.
Zombili izinhlobo zenzelwe ukwethembeka, ubuhlakani nothando maqondana nomndeni. Amanye ama-Dutchie aficionados athi iDutch Shepherd izimele ngokwengeziwe futhi inamandla amakhulu okusebenza kune-GSD, ethembele kakhulu emiyalweni yomphathi.
I-GSD vs. Shiloh Shepherd
UShiloh Shepherd ( umthombo )
I- UShiloh Shepherd kungumphumela wokuzalanisa kusuka ku- a khetha iqembu yabelusi baseJalimane ukugcina izici ezithile ngaphakathi kweqembu.
Uma uthanda i- Isho impisi from Game of Thrones, iShilo liyiphupho eligcwaliseka.
Lo Melusi mkhulu, unesisindo esifinyelela ku I-120 lbs . Bane- eside, ijazi shaggy lokho kungeza kuphela usayizi wabo futhi kubuye kwehlukanise ne-GSD ejwayelekile.
Uma kukhulunywa ngobumnene, ngeke uthole mehluko omkhulu ngaphandle kokuthi uShilo kuthiwa nguyena ohamba phambili kulaba bobabili.
Lo Malusi uvame ukusetshenziselwa umsebenzi wokwelapha ngenxa yemvelo yakhe ezolile, enesineke futhi enobungane.
Igama likusho konke - le ngxube ye-GSD ingakhula ifike ku- Amasentimitha angama-29 bese ulinganisa Ama-150 lbs .
Umehluko omkhulu phakathi kweNkosi ne-GSD wuhlu lozalo. I- Inkosi uMelusi ifaka izakhi zofuzo ezivela kubelusi baseMelika nabaseYurophu baseGerman, iGreat Pyrenees ne-Alaskan Malamutes.
Njengoba iNkosi iyi iwele , ukubukeka nobumnene bayo kuyahluka ngomdlwane nomdlwane. Kepha, ngokuvamile, lesi sidlakela esimnene siyinja yomndeni enhle esebenza kahle kakhulu nezingane ezincane.
Lapha ungabuka i-King Shepherd edlala nge-GSD ejwayelekile.
I-GSD vs iBelgian Malinois
IBelgian Malinois ne-GSD empeleni ziyafana uma kukhulunywa ngobuntu.
Zombili zinjalo uhlakaniphile futhi uyasubatha izinja, ezisetshenziselwa umsebenzi nobungani.
Umehluko omkhulu ukubukeka. AbaseMalinois kuncane , enezindlebe ezijulile nebhantshi elifushane, eliwugqinsi.
Kukholwe noma ungakukholwa, iMalinois iyi- omkhulu wokuchitha isikhathi, mhlawumbe ngaphezulu kune-GSD.
Ngenkathi i-GSD ibalwa yi-AKC njengenye yezinhlobo ezithandwa kakhulu, iMalinois ihlala cishe endaweni yama-50.
Lokhu kungashintsha, kepha, njengoba sekuqala ukuguqula amakhanda futhi kuthola inzalo.
Awukwazi nje ukushaya inja emndenini kaShepherd!
Intengo yomalusi waseJalimane iyahlukahluka kakhulu, kuya ngokuthi uyithenga kuphi injanyana yomalusi waseJalimane nezinye izinto ezifana nombala wengubo yayo.
Izinja ezingabizi kakhulu zivela ezikhungweni zokutakula nezindawo zokukhosela. Zingaba mahhala noma zibize kuze kufike $ 200.
ABelusi baseJalimane abafuyelwe ubungane bangabiza phakathi $ 300 no- $ 900 , ngenkathi i-GSD ekhiqizelwe umbukiso ibiza kakhulu, ibiza noma yikuphi phakathi $ 6000 kanye no-7000.
Futhi lokho kumane nje kuyisiqalo. Isinqumo soku thenga inja kusho konke okuningi ngaphezu kwezindleko zokuqala. Uma uzimisele ngokuthenga i-GSD, kufanele uqonde utshalomali ozolwenza eminyakeni eyi-13 ezayo.
Hlala phansi, gqoka ikepisi lakho lokucabanga, bese wenza isabelomali sonyaka. Enhliziyweni yakho, ungahle ulungele inja, kepha ngabe i-akhawunti yakho yasebhange isilungile?
Ngezansi, ngibhale iningi lezindleko ngqo ngalolu hlobo ukukunikeza umbono wezindleko zonyaka.
Izindleko zokuqala (ukuvakashelwa okokuqala ngudokotela wezilwane, izivivinyo, i-spay / neuter, imigomo, ukwelashwa kwama-parasite): $ 650
Ukudla: $ 150 kuya ku- $ 250
Izimpahla (amathoyizi, ikhola, i-leash, njll.): $ 250
Umshwalanse we mpilo : $ 30 kuya ku- $ 50 ngenyanga
Ukuqeqesha : $ 30 kuya ku- $ 100 ngehora
Vele, lezi zibalo azibekiwe etsheni. Ungase uthathe isinqumo sokushiya umshwalense wesilwane noma uthathe ukuqeqeshwa ngokwakho. Ekugcineni, konke kuza empilweni ofuna ukuyinika inja yakho.
Khumbula nje, uma usunikeze imali bese uphatha lelo bhola elincane eligingayo ezingalweni zakho, uzobeka ithemba lakhe kuwe ukuqinisekisa ukuthi uphephile futhi uphilile impilo yakhe yonke.
Ufundile ngomlando onemibala kanye nemvelaphi yoMalusi waseJalimane. Ngemuva kwalokho, wakhangiswa ubuhle bakhe futhi wahlatshwa umxhwele yithalente lakhe nobumnene bakhe.
Ngemuva kokuhlala phansi, ucabangisisa ngemithwalo yemfanelo yokugcina i-GSD iphilile futhi ubhala isabelomali, usukulungele ukuthatha igxathu uthenge umdlwane.
Nawa abanye abalimi abahlonishwayo ukuze uqalise kusesho lwakho:
Vom Ragnar Abelusi baseJalimane (Illinois)
Indlu yenaliti (ECalifornia)
Abakwa-Landheim German Shepherd (Indiana)
kusuka endlini eseLerchenweg (Idaho)
Abelusi beSapphire (EMontana)
Ukugwema izigayo ze-puppy
Uyazi ukuthi yini a umshayo wokugaya umdlwane kunjalo? Incazelo yesichazamazwi ithi, 'Isihogo esingokoqobo emhlabeni ngezinja.'
Kulungile, ngakho-ke leyo akuyona incazelo engokoqobo, kodwa ngicabanga ukuthi abathandi bezinja bangavuma bonke ukuthi kuhle kakhulu kulingana nomthethosivivinywa.
Lapho uqala usesho lwakho ngomdlwane we-GSD, thatha isikhathi, cwaninga kahle futhi ungayi kumzalisi wokuqala ohlangabezana naye. Lolu uhlobo oluthandwayo, futhi ngeshwa, izinja ezifunwa kakhulu zihumusha imali esheshayo ezokwenziwa.
Izigayo zemidlwane zizalela izinja ngokungakhathali nazo ayinandaba nempilo , injabulo nokuphila kahle. Lezi zikhungo ezizalisayo zifana nezimboni, lapho izinja zezinsikazi zizalaniswa kaninginingi khona ukukhathala noma ukufa.
Bahlala ku izimo ezingekho emthethweni , babhajwe ezinkanjini. Amarekhodi ezokwelapha awagcinwa noma, ngakho-ke imidlwane ekhuphuka iyothengiswa ivame ukuba nezinkinga zempilo.
Izeluleko eziyi-10 eziphezulu zokuthola abalimi be-German Shepherd
Izigayo zePuppy zigcwele yonke i-inthanethi, kepha ungafunda izimpawu namafulegi abomvu ukugwema lezi zindawo bese uthola umdlwane ovela kumfuyi onedumela.
1. Ungenzi ukuthengiselana online.
Izigayo zezidlwane zikhula kahle kwi-Intanethi. Benza iziqinisekiso ezingaqondakali ngombala 'ongajwayelekile' webhatshi noma ukuthi ubumnene buzoba kanjani lapho umdlwane ukhula.
Bakulungele ukukulinga ngesithombe esihle se-puppy abasuse iPinterest, beqinisekisa ukuthi ungathenga yona kanye injana.
Into ukuthi, kungcono ukwenze masinyane bese ufaka imininingwane yekhadi lakho lesikweletu online, ngoba abanye abathengi abanentshisekelo sebezothatha umdlwane wakho wePinterest.
Nginesiqiniseko sokuthi uthola isithombe. Gwema ukwenza ukuthenga okungacabangi online. Umdlwane yisidalwa esiphilayo, hhayi ithoyizi ongangeza enqoleni yakho yokuthenga ebonakalayo.
2. Kushibhile akubi ngcono ngaso sonke isikhathi.
Uma uhlola abalimi ku-inthanethi, kungenzeka ukuthi ubheka izindleko zomdlwane ngamunye waseJalimane. Kungaba yisilingo sokuya eshibhile eshibhile, kepha kulokhu, lokho kuyisibonakaliso esiqinisekile sokugaya umdlwane.
Bafuna nje ukwenza imali esheshayo, bathumele imidlwane ngomnyango ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka. Abazalisi bokuziphatha baziqhenye ngodoti wabo, bathengisela kuphela labo abanemali yokukhokhela ama-bloodline asezingeni elifanele.
3. Thatha isikhathi sakho.
Izigayo zePuppy zizama ukukukhohlisa ukuthenga khona manjalo. Njengomthetho wesithupha, ungalokothi uhambe nomfuyi wokuqala ohlangana naye, noma ngabe babonakala behlanzeke kangakanani.
Bheka abalimi abaningana futhi yenza uhlu kwezintandokazi zakho eziphezulu. Ngemuva kwalokho, qala ukuxhumana nabo ukuthola eminye imininingwane ejulile.
4. Vakashela umfuyi.
Umfuyi oziphethe kahle uzokujabulela kakhulu ukuvakashela izakhiwo lapho imidlwane izalelwe khona futhi uchithe ingxenye yokuqala yezimpilo zabo ezisencane.
Ukuvakashela umfuyi kungenye yezinyathelo ezibaluleke kakhulu okufanele uzithathe ngaphambi kokuthenga umdlwane. Kunengqondo ukuthi lapho umdlwane wakhuliswa khona nokuthi waphathwa kanjani kuzoba nomthelela ohlala njalo empilweni yawo.
Bheka ifayela le- inhlanzeko , uma kunesikhala esiningi, nokuthi imidlwane ibigcinwe emakhejini noma ivunyelwe ukuzula.
5. Buza imibuzo efanele.
Buza izingqondo bese ubhala phansi imibuzo ozoyibuza umfuyi. Nayi eminye imibono:
Ngabe imidlwane ihlolwe udokotela wezilwane?
Ngabe zibhalisiwe nanoma yimaphi amakilabhu?
Ngabe bathole imishanguzo yenhliziyo noma okunye ukwelashwa kokuqala?
Ngabe imidlwane ithole ukuzihlanganisa nezinye izinja / abantu kusukela ngesikhathi izalwa?
Unexesha elingakanani ungumfuyi?
Kungani waba ngumfuyi?
6. Hlangana nabazali.
Lesi sinyathelo sibaluleke kakhulu. Ukuhlangana nabazali kuyindlela engcono kakhulu yokwenza hlanganisa izinkomba zokuthi umdlwane uzokhula kanjani ukuze ubukeke futhi usebenze.
Buza ngomfuyi mayelana nabazali begazi futhi isizinda sezokwelapha, ikakhulukazi maqondana ne-hip dysplasia.
7. Thola imvume yezempilo.
Uyazikhumbula lezo zimvume zezempilo engizishilo? Lesi yisikhathi sokubuza ngabo.
Umfuyi ophethe kahle uzoba nokuvunyelwa kwe-hip dysplasia neminye imibhalo yezokwelapha ukuze aqinisekise ukuthi umdlwane uhlolwe ngudokotela wezilwane futhi uphilile.
8. Bheka ubufakazi.
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokufunda ngabalimi ukuzenza bheka amakhasimende adlule. Imvamisa ungathola ukubuyekezwa online futhi abalimi bazobakhombisa futhi.
Le kuyindlela enhle yokuthola imininingwane esobala, eluhlaza mayelana nokuthi laba balimi sebenza njengebhizinisi.
9. Bheka imidlwane
Uma uvakashela imidlwane, zama ukungakhukhulwa ukusika kwazo. Bheka izindlela ezithile zokuziphatha ezikhombisa inkinga engaba khona yezempilo noma inkinga yokuziphatha.
Imidlwane akufanele ibe njalo amahloni ngokweqile noma ukwesaba . Buka ukuthi zihamba kanjani, uqaphele i ukuxhuga noma ukulimala. Hlala kuze kube yilapho umdlwane uzikhulule. Indle kufanele iqine, ingagijimi noma onegazi .
10. Hlala uxhumene
Ngemuva kokuthenga i-puppy yakho, qhubeka uxhumane nomfuyi. Bazi umdlwane kangcono ukwedlula noma ngubani, ngakho-ke uma kuvela izinkinga ngokuhamba kwesikhathi, ungaxhumana nabo ukuthola isiqondiso.
Kuyisinqumo esihle ngaso sonke isikhathi ukwamukela inja eshiyiwe. Yebo, i-GSD wuhlobo oluthandwayo, kepha lokho kusho nokuthi inqwaba yezinja ezishiywa ezindaweni zokukhosela ngabanikazi abangakwazi ukuziphatha.
Uma unentshisekelo yokutholwa, nazi izindawo zokukhosela ezinhle ongazihlola.
Ukutakula Kwabelusi BaseJalimane : ENorth Carolina, eSouth Carolina, eVirginia
Ukusindiswa Kwabelusi BaseMid-Atlantic : MD, DC, VA, PA & DE
Ukusindiswa Kwabelusi BaseWestide : California
I-German Shepherd Dog Club yaseMelika
Siyakuhalalisela - manje usuyisinyathelo esisodwa esikhulu esiseduze nokuba yingcweti ye-GSD. Umbuzo manje uthi, ucabangani ngalolu hlobo oluhle kangaka?
Kuyinja edumile, kepha akuyona eyabo bonke abantu.
Ngomqondo wayo obukhali nomzimba osebenzayo, i-GSD ilungele umuntu onayo isikhathi sokunikela ukuqeqeshwa nesikhathi sokudlala. Lolu hlobo ludinga ukukhuthazeka ngokwengqondo nangokomzimba ukuze kugcine isithukuthezi nokukhathazeka kuthambile.
Njengoba lena kuyinja enkulu, a indlu enegceke elibiyelwe Kunconywa ngaphezu kwefulethi edolobheni.
Le canine enothando ilungele abangashadile noma imindeni. Kunjalo ukuvikela nothando maqondana nezingane nezinye izilwane ezifuywayo. Ngeshwa, ubuqotho babo bubenza bathambekele ukukhathazeka ngokwehlukana kanjalo.
Ucabangani ngoMalusi waseJalimane? Sitshele kumazwana!
Umhlahlandlela Obonakalayo we-Dog Anatomy (Imisipha, I-Organ & Skeletal Drawings)
Umxube waseJalimane Umalusi Husky: Isimo Sezulu, Umhlahlandlela Wokunakekelwa kanye Namaqiniso
Amagama we-500 + we-Bulldog: Khetha Igama Elifanele Le-Bulldog Yakho
Ingabe unomfutho ngokwanele weNja Yenkomo yase-Australia?
IPomsky, i-Triple-A Crossbreed: Iyathandeka, iyasebenza, futhi iyashintshashintsha
ICoripoipo: Konke odinga ukukwazi mayelana ne-Cute Corgi Poodle Mix
I-Aussiedor: Ingabe i-Australian Shepherd Lab Mix ikufanele?
imiphi imibala engena ngama-pomeranians
ungalakha kanjani ibhokisi elihluphayo lenja enkulu
ishadi lokukhula kwe-boerboel eningizimu Afrika
inja enjani i-feist